Qoomameeyntii Wilshere Ee Arsenal Iyo Sheekadii Dhexmartay Isaga & Wiilkiisa – Garsoore Sports
Qoomameeyntii Wilshere Ee…
Xiddigii hore ee kooxda Arsenal Jack Wilshere oo haatan wakiil xor ah ayaa qirtay in nolosha koox la’aan ay adag tahay maadaama carruurtiisu ay kusoo hadalqaadaan sababta aysan kooxna u qaadan isaga tan iyo markii uu dhacay qandaraaskii muddada gaabnaa ee uu kula jiray kooxda Bournemouth.
Ciyaartoy aad u tiro yar ayaa nasiib u yeeshay inay guulo waaweeyn ka gaaraan kubbada-cagta caalamka marka loo eego Wilshere, oo ahaa wiilkii hore ee xerada Luton Town balse leh awoodda La Masia, laakiin dhaawacyo hareeyay ayaa yareeyay waqti badan uu ku bixin lahaa garoonka si uu usii horumariyo tayadiisii muuqatay markii uu ku sugnaa Arsenal.
Tababarihii hore ee kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa ku tilmaamay Wilshere mid “farsamo Isbaanish ah leh, laakiin qalbi Ingriis ah” , Wilshere wuxuu lahaa wax walba oo uu ku noqon karay mid hormuud u noqda kooxda Arsenal sanadaha soo aaddan, laakiin hadda wuxuu is arkay isagoo tababaranaya kaligiis si uu u dhiso korna ugu qaado taam ahaanshihiisa xilli uu rajaynayo in taleefankiisu ay koox cusub kasoo garaacday.
Inkastoo uu soo gabagabeeyay 17-kii sano ee uu Arsenal joogay sannadkii 2018, Wilshere wuxuu xiriir wanaagsan la leeyahay taageerayaasha aaminka ah ee Gunners oo uu had iyo jeer ugu yeeri doona ‘Super Jack Wilshere’.
Si kastaba ha ahaatee, 29-jirkan ayaa qirtay in burburka xirfaddiisa ay inta badan su’aalo adag ka keenaan kuwa isaga ugu dhow, waa afartiisa carruur ; Archie iyo Delilah oo ay u dhashay xaaskiisii hore ee Lauren Neal, Siena iyo Jack Junior oo ay u dhashay xaaskiisa haatan ee Andriani.
Wilshere ayaa u sheegay The Athletic: “Caruurteeydu waxay ku jiraan da’ ay fahmi karaan. Gaar ahaan Archie, oo sagaal jir ah. Runtii wuu ila sheekaysanayaa isaga oo leh, ‘Kawaran MLS?’ ama ‘Maxaad ugu ciyaari weyday La Liga?’
“Wuxuu jecel yahay kubbada-cagta, wax walba ayuu ka ogyahay kubbada-cagta, waana ay adag tahay in loo sharraxo isaga, wuxuu igu dhihayaa ‘ sidee bay u jirin koox ku rabta? Ma aqaano. Laakiin sideen ugu sharraxayaa? “
Kubbada-cagta Ingriiska ayaa marar dhif ah aragtay ciyaartoy aad u da ‘yar oo aad u xirfad badan markii ugu horreysay ee uu Wilshere soo jabiyay kooxda 1aad ee Arsenal, wuxuu ahaa xiddigii ugu fiicnaa kulankii Barcelona ee Champions League kaddib markii uu soo bandhigay bandhigay waxqabada leh isaga qabsaday maamulka iyo maareeynta khad dhexe oo ay ka cayaarayaan Xavi, Busquets iyo Iniesta.
Jack Wilshere ayaa weli astaan u ah waayihii Emirates ee xubin kasta oo taageerayaasha Arsenal kamid ah.
Wilshere ayaa sannadkii 2018kii ka baxay albaabka Emirates Stadium, si uu uga cayaaro kooxdiisii carruurnimada ee West Ham United tallaabadaas oo xiddigii hore ee Ingiriiska uu ku guuldarreysatay inay u noqoto sidii uu rajaynayay.
Wuxuu yiri “Daacaddii, ma ahayn inaan waligay ka tago, ma ahayn inaan ku biiro West Ham – ma ahayn inaan ka tago Arsenal.”